Uma kuziwa isikhathi ukuhalalisela umuntu iholide ezithile, ukuthenga isipho siba lula kunalokho ukupheka ukubingelela ngamazwi. Phela, ngezinye izikhathi akucaci, yini enye engase ifunwe ufuna kulokho okushiwoyo abanye abantu. Futhi lokhu, ngasendleleni, kuyinkinga enkulu kwabaningi. Kulesi sihloko sizoxoxa ngendlela ukulungiselela 4 ukubingelela lomshado nokuthi ungase ufisa for owakwakhe.
Imithetho lokubhala izifiso
Ekuqaleni, udinga usitshele, lokho kwenziwe imithetho okufanele ababehlose ukudala lokubingelela olungavamile. Yini odinga ukuyazi futhi yini kubalulekile ukukhumbula?
Njengoba Bathi, abantu badinga ukuba sizimisele ukuthelwa lokho afuna yena. Kodwa-ke akudingekile ukuba ahlale kuyo. Kungcono ufisa ngalokho akwenzako nje akwanele. Futhi lokhu akuyona ngempela imali. Abanye abantu abanayo kumnandi ngokwanele, umuntu - uthando, futhi othile, futhi ukuhleka zezingane. Umkhaya njengendoda nenkosikazi bengingathanda ukuze sithole induduzo, imfudumalo izihambi.
Ngokusekelwe osekushiwo, kufanele kuphawulwe ukuthi ukunakekelwa okukhulu kufanele kuthathwe nezifiso. Kulula kakhulu kuleli cala, umuntu okuphathe kabi. Ngokwesibonelo, uma umbhangqwana ayikwazi okukhulelwa ingane, awudingi kakhulu izingane zakhe, ngoba lokhu nkumbulo angase kwamcasula owakwakhe, ngiyajabula fun.
Ukucabanga isifiso kumelwe ngokulinganisela sikubeke. ukubingelela Long ngokuvamile ukukhathala, futhi abantu balalela irowu last isivele isigamu Onendlebe ulahlekile mhlawumbe amazwi ezibaluleke kakhulu.
Amazwana kufanele kugwenywe. Ungakwazi Yiqiniso, ufisa impilo enhle, injabulo nezinto ezibonakalayo inhlalakahle. Kodwa kungcono elula ngakho futhi ezivamile ngaphandle kwesizathu, cishe, muzwa.
Futhi-ke, kubalulekile ukukhumbula ukuthi udinga ukuba sizimisele ukuthelwa ubhanqe ngenhlitiyo lehlantekile. Kuphela kulesi simo kuyoba amahle, ngeqiniso nangemfudumalo ngobuqotho.
kubalulekile nokuba ukubalula yokuthi lomtjhado ukubingelela 4 kungenziwa zicatshangwe temibhalo yephrozi netindzaba namavesi. Konke kuncike zalowo mbhangqwana, ngubani oyoba umbhalo sibhekiswe. Ungakwazi Yiqiniso, thatha inkondlo kakade eyalotshwa umlobi, noma inkulumo lomunye umuntu. Kodwa kungcono beveza awabo.
Njengoba sekushiwo, izinto lomshado ukubingelela 4 kungenzeka evesini. Indlela beveza le nkondlo efanayo, uma kungekho ithalente akhethekile amakhono? Kulula kabi. Ukuze uthole ngesisekelo isidingo sokuthi uthathe noma isiphi esigaba, kancane kuyishintja. Into esemqoka ukuthi izwi lokugcina umugqa ngamunye rhymed. Uma ingakwenzi lokho Ihambe ukuthola imvumelwano ukuba igama elithile, ungasebenzisa uhlelo olukhethekile. It ngokuzenzakalelayo ukhetha igama ekungilo, ngaphezu kwalokho, ukuhlinzeka amazwi ambalwa ukukhetha kombhali.
Lokho isifiso Kubonakala kuzoba usuku oluhle?
Impilo, imali namandla?
Ngifisa kinina bahlobo bami,
Ukuze sijabule oye!
Ilungiselela lover wakhe isipho, kubalulekile ukuba singakhohlwa ukuthi izidingo kanye siyakuhalalisela nendoda yakhe kanye 4 wedding yokugubha usuku. Phela, isipho samanje, futhi amazwi efudumele ukuze umuntu kufanele futhi sithathe. Yini kumelwe sikhumbule ukuthi, ekhuphuka nge umbhalo siyakuhalalisela?
Ungaqala nge umlando umhlangano noma ukuphola. Abesifazane khumbula kahle lezo zikhathi. Shí emkhathini we esidlule wesilisa wonke umuntu.
Okulandelayo, udinga ukuba uhlu zonke izinto ezinhle, okuyizinto ubunjalo indoda. Ukugcizelela kudingeka kwenziwe phezu okuthile eliqhakaze ngempela.
Uma indoda engabonisa ngayo ukuthi bahlekise ngabo, kumele ishiwo izici zayo ezingezinhle. Kodwa lokhu kufanele kwenziwe ngokucophelela, nengxenye-Entela, ngesisa nokuzitika.
Manje sidinga ukubonga umyeni wakhe zonke izikhathi amahle zokuphila ndawonye, ngoba lezo zinsuku eliqhakazile wenza olithandayo injabulo kokubili.
Futhi ekupheleni umfazi kufanele ufisa lokho yena ngokwakhe efuna. zingaphendulwa ngokuqiniseka ukuthi yilowo nalowo wesifazane uyazi ukuthi amaphupho eyithandayo.
othandekayo unkosikazi isifiso
Yini kungaba ngomfazi siyakuhalalisela kusuka 4 wedding yokugubha usuku? Abesilisa cabanga umbhalo kancane more xaka. Yingakho kumele inikezwe amathiphu ambalwa esisebenzayo:
4 lomshado ngokuthi Nelineni. Indoda ingabonisa ukuthi ngemva kweminyaka engu 4 ubudlelwane sasinamandla kangangokuba bona aphule nganoma yisiphi isikhathi. Futhi konke lokhu ngokusebenzisa uquketheni nesineke futhi Inkosikazi ehlakaniphile.
Okulandelayo, qiniseka aveze ukuthi umkakhe, naphezu isikhathi bahlala ndawonye, wahlala namanje njengoba enhle futhi uzilungise. Futhi ezifiselekayo, njengoba ezinyangeni zokuqala emihlangano. Ukuze abesifazane kubaluleke kakhulu ukwazi. Ungase futhi uqaphele ukuthi le ntokazi futhi umngenisi wezihambi enkulu, ngoba ekhaya njalo inhlanzeko, ukuze, futhi etafuleni - dinner okumnandi okushisayo.
Futhi ukuphela udinga into zakho ozithandayo ukuze ufisa. Khona-ke umbhalo kuyoba ngokuqinile ngamunye. Ngokungangabazeki, zonke umfana uyazi lokho afuna ladylove yakhe.
Ukucabanga ukubingelela 4 lomshado, izinkondlo funny futhi imibhalo futhi kufakwe kuwo. Ungakuvumeli lokhu idili ezingaphezu kuka sina benza amahlaya ngosuku ezifana kungenzeka. Kodwa lapha kufanele kuphawulwe ukuthi akufanele bahlekise buhlungu ambalwa izingqikithi, ngoba lokho kungasilimaza kuhlala khona lezi zithandani okukhulu.
Siyakuhalalisela yokugubha usuku lwakho lomshado 4 (ukudlala, bejabule):
unkosikazi othandekayo, uke waphila omunye unyaka ndawonye. Unyaka kwakunzima, ngoba zonke izinsuku ukuqoqa amasokisi ngoba obathandayo ulalele izinkulumo nsuku zonke ngesihloko esithi "Awuzange ukukwenza ngendlela ofuna," kakhulu, kunzima kakhulu. Kodwa ungalilahli ithemba, kufanele ngaphambi namanje kakhulu, eziningi kakhulu le minyaka. Isineke yebo uyojabula!
Yiqiniso, lo mbhalo kufanele kuhambisane ukumomotheka ngisho uhleko. Uma umbhangqwana mabi kakhulu ngalolo suku, hhayi trifled nge. Ukuze wenze lokhu, ungathola esinye isizathu.
Ngenxa okukhipha encane, siphawula ukuthi ekhuphuka nge siyakuhalalisela ku 4 wedding yokugubha usuku, kumelwe acabangele isifiso imibhangqwana eminingi. Udinga ukusho lezo zinto ezindebeni wonke umuntu, ngaphandle kokuphazamisa izici obuseduze kakhulu futhi siqu yokuphila abashadayo. Okubaluleke kakhulu, udinga beveza imikhonzo inhliziyo.
Isiliva Wedding Abazali: Yini abazali bakho?
Inqubo yokwenza i-jelly kusuka ku-ugqumugqumu ebusika
Ezokuvakasha Ecological njengoba uhlobo oluthile lokuzijabulisa ethandwa